Maitiro Ekutamba Super Mario Mhanya naJailbreak | IPhone nhau
Maitiro Ekutamba Super Mario Mhanya neJailbreak
Luis Padilla | | Cydia, IPhone mitambo, dzakawanda
Nezuro mutambo unotarisirwa kwazvo wegore, Super Mario Run, akazosvika paApp Store. Yekutanga 100% Nintendo zita rekuuya ku iPhone yedu nePadad nemumwe weakakurumbira mavara munyika yemitambo yemavhidhiyo, zvinopfuura zvikonzero zvakakwana zvekutarisira kuve kukuru. Asi kushamisika kusingafadzi kwakawanikwa nevashandisi vazhinji ndekwekuti hazvishande kana uine Jailbreak yaitwa. Semazuva ese, dambudziko ndiko kutanga kwemhinduro, uye Cydia inopa yakapusa nzira yekupfuura ichi chirambidzo kuti ukwanise kutamba Super Mario Run kunyangwe uine Jailbreak yaitwa. Tinokutsanangurira iwe pazasi.
Kudzivirira mafomu kubva mukushanda pamidziyo yeJailbroken chinhu chakapararira sezvo chisina basa, uye kune akawanda ma tweaks anobatsira iyo Jailbreak isingaonekwe. Iyo yega inoita kunge iri kushanda neSuper Mario Run inonzi tsProtector 8+ (iOS 9 & 8), iyo inowanikwa muBigBoss repository uye yakasununguka zvachose. Kamwe pawakaiswa pane chako chishandiso, zvese zvaunofanirwa kuita kuenda kune iyo Zvirongwa menyu yemuchina wako, tsvaga chikamu chakatsaurwa kune tsProtector uye vhura iyo «Nyore Rondedzero Mapurogiramu» menyu, ipapo iwe unowana iyo Super Mario Run mutambo pakati pezvimwe zvinoshandiswa. iyo yawakaisa, shandisa uye unogona kunge watogona kushandisa mutambo weNintendo pane yako iPhone ne iPad.
Nintendo iri kungwarira chaizvo neSuper Mario Run uye haidi kubiridzira kunokanganisa bhizinesi richangotanga kukambani yeJapan. Uye zvakare, kunogara kune matambudziko anokonzerwa ne "kubiridzira", izvo zvigadziriso zvinokutendera iwe kuti uwane mibairo uye ufambire mberi kuburikidza nemutambo nekukurumidza nenzira "isiri pamutemo", uye izvo zvinopedzisira zvichikanganisa ruzivo rwevashandisi vanokwikwidza muinternet modhi nekuve panguva yakaoma kana ukasashandisa izvo zvigadziriso. Ndicho chikonzero nei inoshanda internet yekubatanidza inodikanwa kuti itambe Super Mario Run uye yakaisawo ichi chirevo cheJailbreak.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Maitiro Ekutamba Super Mario Mhanya neJailbreak
Handizive kana chinhu chimwe chete ichi chikaitika kune mumwe munhu, asi ini ndine dambudziko uye handina jeri kupaza kwakaitwa. Zviri pachena kuti ini ndaive nejailbreak muIOS 9.3.3 uye kugadzirisa kuIOS 10. Unoziva chero mhinduro yedambudziko?
David moreno akadaro
Izvozvowo zvinoitika kune vanhu vaive nehusungwa munguva yavo uye iye zvino havana. Uye ndeipi mhinduro kwatiri?
Pindura David Moreno
Dambudziko nderekuti kana iwe ukagadzirisa iyo iPhone neJailbreak, iyo sisitimu inoshanda inokanganiswa kunyangwe zvese zvichiratidzika kunge zvakajairwa. Zano: Ita sevha muICloud yezvese ruzivo rwako kana kuburikidza neTools kana chimwe chirongwa kunze kweTunes, nekuti kana iwe ukaita backup neiyo yekupedzisira, inochengetedza matambudziko ane iyo system. Dzosera iyo iPhone uye wapedza.
Salvax imwe akadaro
Isa nhare mukudzoreredza modzo uye ita yekudzorera kubva pakutanga uye dambudziko rapera
Pindura kuna Salvax imwe
Uye usaise backup
kuti… .. usadzorere backup…. isa se iphone nyowani ,,, uye yakagadziriswa
Ndine Jailbreak iOS 9.3.5 uye inoshanda zvakakwana kwandiri. iPhone 6s
Ndine jailbreak uye ndakaisa iyo Tweak yandinoisa mutambo mublacklist uye nenzira imwecheteyo inoramba ichivhara kana ndichiivhura, inongosvika pachiratidziro chitsvuku, chii chimwe chinofanirwa kuitwa nekuti zvinoita sProtector haisi kushanda
Jose Ignacio Sel akadaro
Ini ndaifanira kuita rombo rakanaka! Ndine Jailbreak uye ini handina kufanira kuisa iyo tweak ... inoshanda zvakakwana kubva pakutanga. Ngatione kana paine rombo rakanaka uye ivo vanogadzira chimwe chinhu kuti chive chakazara pasina kubhadhara ...
Pindura José Ignacio Sel
Apple inodhinda zviziviso zviviri zvitsva zveApple Watch Series 2